हाम्रो समाज : छोरी माग्न जाँदा दाउराको भारी ! | Kendrabindu Nepal Online News
31156826 963953 7434137 22758736
हाम्रो समाज : छोरी माग्न जाँदा दाउराको भारी !
२२ भाद्र २०७६, आईतवार ०८:४७
कतिपय गाउँमा विवाहका बेला दाइजोको मोलमोलाइ हुन्छ । छोरीको विवाह गर्न बाबुआमाले निकै ऋण बोक्नुपर्छ । नेपालमा यस्ता ठाउँ पनि छन्, जहाँ दाइजोका नाउँमा एक रुपैयाँ कारोबार हुँदैन ।
उत्तरी गोरखाका गुरुङ समुदायको बसोबास रहेका बस्तीमा केटाले दाउराको भारी दिएर विवाहको प्रस्ताव गर्छन् । दाउरा स्वीकार भए विवाह पनि स्वीकारेको अर्थ लाग्छ । केटीले जसको भारी हो बोकेर उसकै घरमा लगेर छाडिन् भने अस्वीकार गरेको बुझ्नुपर्छ।
यस्तो प्रथा धार्चे गाउँपालिकाका लापु लगायत सातवटै वडाका गाउँबस्ती, बारपाक स्वाँरा, सौरपानी, घ्याच्चोकमा प्रचलित छ।
यसरी गरिएको विवाहमा न लाखौं खर्च, न झन्झट। ‘केटाले आफूलाई मन पर्ने केटीको घरमा दाउराको भारी लगेर राखिदिन्छ’, धार्चे गाउँपालिका ५ यमगाउँका टेकबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘फिर्ता गरेनन् भने केटी विवाह गर्न सहमत भई भनेर केटाले बुझ्छ । अनि बिस्तार बिस्तार केटीको घरमा गएर काममा सघाउन थाल्छ। केटी र उसका अभिभावकको मन जितेपछि विवाह पक्का हुन्छ।’ यसरी विवाह गरेपछि छोराको छेवरमा रीत पुर्‍याउने चलन छ।
छोरी माग्न जाँदा, दाउराको भारी, हाम्रो समाज :
Prevभारतीय राष्ट्रपतिलाई पाकिस्तानले हवाइमार्ग नदिने
३ सय ३१ जना सांसदहरुको भिडियो प्रोफाइल तयारNext